मोदीको भम्रणका बेला उपत्यकामा शनिवार कुन रुटमा कतिवेला सवारी रोकिने हेर्नुहोस तालिका
रुकाठमाडौ, २९ बैशाख । नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहेका भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शनिवार मुक्तिनाथ दर्शन गरेर फर्केपछि पशुपतिको दर्शन गर्न जानेछन् । पशुपतिनाथ मन्दिरमा विशेष पूजा गरेपछि मोदी जोरपाटीमा रहेको होटल हायातमा जानेछन् । सो समयमा विमानस्थल, तिलगंगा, बनकाली मोड, गौशाला चोक, भुबनेश्वरी चोक, पशुपतिको पश्चिम गेट, मित्रप..
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुक्तिनाथ मन्दिरमा विशेष पूजा
मुस्ताङ,२९ बैशाख । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुक्तिनाथ मन्दिरमा विशेष..
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ‘गार्ड अफ अनर’
काठमाडौ,२८ बैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ‘गार्ड अफ अनर’ दिएर सम्..
काठमाडौ । इरानी महिलाहरूले फुटबल खेलमा उपस्थित हुन नपाएपछि आफुलाई पुरुषको भेषमा ..
अखिल अध्यक्षमा घले दौडः आत्मालोचना प्रकरणले नयाँ तरंग
पर्यटन मन्त्रीसमेत रहेका विद्याथी इञ्चार्ज रवीन्द्र अधिकारीले अनौपचारिक गफमा जेठ..
२ नम्बर प्रदेशको विकासका लागि १ अर्ब सहायता दिने प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा
जनकपुर, २८ वैशाख । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २ नम्वर प्रदेश विकासका लागि १ अर्व सहायता दिने घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार जनकपुरमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जनकपुर र आसपासको क्षेत्र विकासका लागि सो सहायता दिने घोषणा गरेका हुन् । जनकपुरक्षेत्रको समग्र विकासका लागि आफू लागिपर्ने भन्दै जनकपुर–जयनगर र..
नागरिक अभिनन्दनमा मोदीलाई २ सय ४२ किलोको माला
जनकपुर, २८ वैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जनकपुरमा १ सय २१ किलोको दुई वटा मालाले अभिनन्दन गरिएको छ । प्रदेश २ सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले १ सय २१ किलोको माला मोदीलाई लगाइदिएका थिए । त्यसलगत्तै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिले पनि १ सय २१ किलोकै छुट्टै मालाले अभिनन्दन गरेका थिए । जनकपुर उपमह..
मोदी आउने समयमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल ३० मिनेट बन्द
काठमाडौ, २८ बैशाख । शुक्रवार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ३० मिनेट बन्द हुने भएको छ।भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यात्रा समयमा विमाानस्थल बन्द हुने भएको हो । दिउसो १२ः ४५ देखि १ः१५ सम्म विमानस्थल बन्द हुने विमानस्थलका प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरले जानकारी दिए। विमानस्थल कार्यालयले सबै एयरलाइन्सहरुको लागि नोटिस टु एयरमेन..
उपत्यकामा मोदीको भम्रणका बेला कुन रुटमा कतिवेला सवारी रोकिने ?
काठमाडौ, २८ बैशाख । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सवारीमा २० मीनेटसम्म सवारी रोकिने भएको छ । दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि आज बिहान जनकपुर हुँदै दिउँसो १.३० बजे काठमाडौँ आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षाका लागि १० देखि २० मिनेटसम्म सवारी रोकिने भएको हो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका सह..
आफ्नो सम्मान सय करोड हिन्दुस्तानीको सम्मान भएको मोदीको भनाई
जनकपुर, २८ वैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफुलाई गरेको सम्मान हजारौ वर्षदेखिको सम्बन्धको निरन्तरता भएको बताएका छन । उनले जनकपुरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको स्वागतका लागि आभार प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागत लगतै उनले जानकी मन्दिरमा विशेष पूजाअर्चना गरे । लगतै जनकपुर अयोध्या बस सेवा सुरु गर्न..
प्रधानमन्त्री मोदीद्धारा जानकी मन्दिरमा विशेष पुजा
जनकपुर, २८ वैशाख । नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जानकी मन्दिरमा स्वागत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागतपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जानकी मन्दिरमा विशेष पुजा गरेका छन । पुजापछि प्रधानमन्त्री मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।
जनकपुर, २८ वैशाख । दुई दिने नेपाल भ्रमणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आइपुगेका छन्। एअर इन्डियाको जहाजबाट मोदी जनकपुर आइपुगेका हुन्। मोदीलाई रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विमानस्थल पुगेर स्वागत गरेका छन्। यस्तै मोदीलाई स्वागत गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि जनकपुर पुगिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओ..
भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न प्रधानमन्त्री ओली जनकपुरमा
काठमाडौ, २८ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्न जनकपुर पुगेका छन् । केहीबेर अगाडि जनकपुर विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेपछि प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री, संघीय सरकारमा सो प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरु लगायतले स्वागत गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सवार विमान के..
१. अरुण तेस्रो शिलान्यास प्रधानमन्त्रीद्वय ओली र मोदीले शुक्रबार काठमाडौंमा स्विच थिचेर ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना शिलान्यास गर्दै छन् । कार्यक्रम अपराह्न द्वारिकाज होटेलमा आयोजना गरिनेछ । संखुवासभा जिल्लामा निर्माणको तयारीमा रहेको उक्त आयोजनालाई लगानी बोर्डको कार्यालयले सहजीकरण गरिरहेको छ । आयोजना शिलान्..
एमालेको स्कुलमा पढ्न थाले जनप्रतिनिधि
ललितपुर, २७ वैशाख । नेकपा एमाले केन्द्रीय पार्टी स्कूल विभागले देशैभरिका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण सुरु गरेको छ । ललितपुर जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय पार्टी नेत्तृत्व सम्मिलित प्रशिक्षण शुरू गरेको हो । नेतृत्व विकासका बारे एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली लगाएतका नेताहरुले प्रशिक्षण दिएका हुन । मार्क्सवादी दर्शन र आर्थि..
सरकारले विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएनः नेता नेपाल
काठमाडौ, २७ वैशाख । सत्तारुढ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारले विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन । वरिष्ठ नेता नेपालले सरकारले विकास, निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन । विहिवार बंगलादेश दुतावासले काठमाडौंमा गर..
जिरी नगरपालिका र चीनको छ्यान्दु नगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने सहमती
काठमाडौँ, २७ बैशाख । दोलखाको जिरी नगरपालिका र चिन स्वसाशित क्षेत्र तिब्बतको छ्यान्दु नगरपालिका वीच भगीनी सम्वन्ध स्थापना गर्न सहमति भएको छ । नेपाल चिन हिमाली मैत्री समाजको निमन्त्रणामा नेपाल आएका छ्यान्दु नगरपालिका प्रतिनिधि मण्डल र पुर्वपर्यटन मन्त्री तथा एमालेका नेता आनन्द पोखरेल, जिरी नगरका मेयर टंक जिरेल , उपमेयर कृष्ण माया ..
काठमाडौ, २७ वैशाख । सरकारी कर्मचारीले हालसम्म पाउँदै आएका महंगी र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै भत्ता खारेज हुनेभएको छ । यो व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने बताइएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारीता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शनले सरकारी निकायमा हुने जथाभावी खर्चम..
काठमाडौं, २७ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बजेटसम्बन्धी छलफलमा बोलाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल झस्किए । सत्तासाझेदार दलका हैसियतले बजेटमा छलफल हुने अपेक्षा गरेका दाहाल ओलीको छलफलमा औपचारिकता मात्र पूरा गरेर फर्किए । बजेट मात्र होइन, राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्तिलगायत म..
काठमाडौ, २६ वैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणबारे संसदमा जानकारी गराउन सांसदहरुले माग गरेका छन् । संसद बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मोदी नेपाल भ्रमण आउने चर्चा भए पनि संसदलाई अहिलेसम्म जानकारी नभएको बताए । सांसद सुवालले मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा राजधानी नआई जनकपु्र आउनुको कारणबारे ज..